Oovimba beBloomsbury (BMY)
Udidi: IBloomsbury (BMY)
I-Bloomsbury thenga njengoMbumbi kunye neDijithali yokuHlawula
Ukupapashwa kweBloomsbury (BMY) yinkampani esemgangathweni ngexabiso elihle kwaye kungoku nje inika ixabiso lokungena elinomtsalane, emva kokuba ixabiso lalo lehlile ukusukela ekupheleni kukaJulayi - kodwa khange liphule mkhuba we-bullish oqale ngo-Matshi kulo nyaka.
Ukunyuka kwamathamsanqa esitokhwe somshicileli kaHarry Potter kulo nyaka, kuyaqhubeka nomkhwa omde osusela ku-Okthobha u-2020, kwaye umpapashi uvele njengophumeleleyo ekuvaleni njengoko ezinye iincwadi bezithengwa zifundwa ekhaya.
Nangona kunjalo, izinto ezifanayo zokutshixa kungenzeka ukuba bezisemsebenzini (ngendlela engeyiyo) ekutshintsheni okubukhali kwexabiso lesabelo ekupheleni kwenyanga ephelileyo, ngokoyika ukuba umahluko wentsholongwane kaDelta ungonakalisa ukuvulwa kwakhona koqoqosho kokubini. i-UK kunye nehlabathi jikelele.
Iingxelo zeBloomsbury zikhula ngamandla kwiinyanga ezi-4 ukuya kuJuni ngo-2021
Nangona kunjalo, sijonga emva kwiinyanga ezine ukuya kuJuni, ukukhula kwengeniso kuwo omabini amacandelo wabathengi kunye nabangengabo abathengi kuye kwaba namandla kakhulu. Umthengi unyuke ngeepesenti ezingama-26 kunye nabangengomthengi ngama-31%.
Mhlawumbi elona khuthazo kubanini zabelo, isigqibo solawulo ngaphambi kwesibetho sokuphinda sinike amandla ukubonelela ngeencwadi ze-ebook kunye neencwadi ezimanyelwayo kwi-Intanethi. Kukwanjalo nengqwalaselo enikwe kupapasho lwezifundo, kunye nokukhula kwengeniso kwecandelo lezemfundo kunye nelobungcali kwicandelo labo elingelolabathengi liphucule i-35%.
Ezi ziphumo zancedwa kukufunyanwa kweNtloko kaZeus (umntu omdala ongumthengi), kunye neRed Globe Press (kwezemfundo nakwezobuchwephesha), ezongeze i- $ 859,000 kunye ne- £ 478,000 kwiingeniso, ngokulandelanayo.
Itshati yamaxabiso okupapasha iBloomsbury, nge-9 Agasti 2021 (i-Courtesy SharePad)
Inkampani ilindele ukuba ukusebenza konyaka ophela nge-28 kaFebruwari 2022 kuhambelane nokulindelwe kwimakethi- ethi, kwisiseko soqikelelo lwangaphambili, iguqulele kwingeniso ye- $ 193.4 yezigidi kunye nengeniso ehlengahlengisiweyo yerhafu ye- $ 19.3 yezigidi.
IBloomsbury ngoJuni ithe ingeniso eyomeleleyo ikwancedwa zizinto ezithile zonyaka, ezizezi, imozulu. Ngokukodwa, izihloko ezibini e-UK zikhankanyiwe njengezibonileyo izibonelelo zentengiso ngenxa yemozulu elungileyo yehlobo: UTom Kerridge Ukupheka kwangaphandle kunye neholide funda Ingqondo ngaselwandle nguLynne Truss. Kodwa imozulu yase-Bhritane yile nto iyiyo, ilanga khange libenabungqina mva nje, ke ezinye zeentengiso eziqhutywa yimozulu elungileyo zinokuncitshiswa ngandlela thile.
Iziphumo zeBloomsbury kwiinyanga ezintandathu eziphela nge-31 Agasti 2021 zilindeleke nge-27 ka-Okthobha ka-2021, ke kuyakufuneka silinde kude kube ngoku ezinye izikhombisi zokuba ukusebenza kweenyanga ezine ukuya kuJuni kugcinwe okanye akunjalo kwaye kulindelwe ukuba kuhambelane okulindelweyo njengoko kuqikelelwe kubaphathi.
Okwangoku, nokuba kwenzeka ntoni na ngenxa yokutshintsha kokuthanda ukufunda ngexesha leeholide zasehlotyeni, yinkampani iyonke amandla ayo kunye nokuma kwayo kwintengiso okusisikhokelo kubatyali mali abanomdla.
Ukuba ufuna ukufunda ngakumbi malunga nokuthengisa impahla ngaphambi kokuba uthenge iBloomsbury, jonga i-learn2trade urhwebo lwesitokhwe phepha.
Ulawulo olomeleleyo lujolise ekukhuleni kwi-Intanethi
Sitsaleleke kwiNgxelo yoNyaka ka-2021 yaseBloomsbury, isihlomelo 2 “semingcipheko kunye nokungaqiniseki” ukuze sijonge ngokweenkcukacha iingcinga nezicwangciso-qhinga zabaphathi ukuya phambili.
Eyona nto sijolise kuyo apha sisoyikiso esivela kwi-intanethi (kunye nokutshixwa kwezinto - nangona oko kuyehla e-UK), njengoko inkampani isitsho kwikholamu yomngcipheko: "Ukukhula kwabathengisi abakwi-Intanethi kunokuba nefuthe ekufumanekeni kwezihloko zeBloomsbury kwaye kukhokelele kunciphiso. kumajelo okuthengisa afumanekayo kwiQela. ”
Impendulo yayo ekunciphiseni ubungozi sele ikhankanyiwe kodwa kufanelekile ukuba ujonge ngakumbi. Nanku lo mbhalo ngqo kule ngxelo: “Ukwanda kokugxila ekukhuthazeni ukuthengiswa kweencwadi ezidijithali (ii-ebook kunye neencwadi ezimanyelwayo) kunye ne-BDR [Izixhobo zeDijithali zeBloomsbury] iimveliso (njengabaxhamli beziko lezemfundo besebenzisa izixhobo zedijithali ukuxhasa ukufunda okude kwabafundi). ”
Ke iBloomsbury ayenzi nje kuphela kwiindawo ezicacileyo zeencwadi ezidijithali kodwa ikwaneliso elibukhali kwimeko yokufunda e-e eguqulwe ngubhubhane. Kule nxalenye yeshishini ayijonganga ukuhambisa nje umxholo kumajelo e-intanethi, kodwa ukwazisa ngeendlela ezahlukeneyo zokusebenzisa, ezinje ngamaxabiso obhaliso kunye nokufikelela ngakumbi kubuchule.
Into enomdla kukuba, ezinye zezinto ezintsha ezivela eBloomsbury ziziphumo zolu khuphiswano lujamelene nazo, ezinje ngohlobo oluvelayo lokuqashiswa kwencwadi yokubhaliweyo, ethi inciphise abapapashi kwimali engenayo. Ngokubonelela ngemirhumo evumela ukufikelela kwinto enokuba yincwadi ebizayo enokufuna kuphela ukubhekiswa kwisemester enye / kwikota okanye ngaphantsi, inkampani ibonelela ngendlela ebhetyebhetye ngakumbi kunokuqesha.
Omnye umngcipheko ophambili ongakhange uchazwe njengomngcipheko ophambili yiBloomsbury sisisongelo esivela kuthengiso lwangaphandle lwezihloko zase-UK ezithengiswa e-UK ngamaxabiso aphantsi, anokuba sisoyikiso kubapapashi base-UK, kuxhomekeke kwindlela urhulumente wase-UK enza ngayo imithetho yelungelo lokushicilela elizayo isithuba seBrexit. I-Bloomsbury ichaza oku njengo "mngcipheko ovelayo" ngesiseko sokuba akucaci okwangoku ukuba oku kuza kubonakala njani.
Ukwahluka kwengeniso: 'umngcipheko wombumbi'
Ingqwalaselo yokugqibela ekufuneka uyiqaphele ngaphambi kokulinganisa ukuba uza kutyala imali na 'ngumngcipheko woMbumbi': yeyiphi ipesenti yengeniso evela kwintengiso yechungechunge oludumileyo lukaJK Rowling kwaye ngaba inkampani ixhomekeke kulo mlambo?
UStockpicker uRichard Beddard uqikelela ukuba inani elingavakaliyo liphakathi kwe- $ 15 yezigidi ukuya kwi-37 yezigidi.
Kumvuzo oqikelelweyo we-193 yezigidi, oko kuphakathi kwe-7.7% kunye ne-19% yengeniso iyonke. Kodwa ngoxinzelelo lwayo kupapasho lwezifundo kunye nobuchwephesha kunye nokufumana kwayo izinto okugxininiswe zizenzo zamva nje, ipesenti yengeniso exhomekeke kuMbumbi kufuneka iqhubeke ukwehla, ngaloo ndlela iphazamisa ukuthengisa kwayo kwaye iqinise ishishini.
Umvuzo oqhelekileyo kwisabelo ngasinye (i-EPS) sikhule ngokungaguquguqukiyo ukusukela ngo-2017 kwaye i-EPS yangoku iyi-16.7p, uqikelelo lwe-18p kunye ne-19.9p ngo-2022 no-2023 ngokwahlukeneyo.
Isivuno sesahlulo siyi-2.78% kwaye uqikelelo lwep / e luqikelelo yi-18.1 efanelekileyo, ikwindawo yeBloomsbury ye-12 kwezingama-30 kwiinkampani zosasazo nezopapasho.
Izabelo ziphezulu nge-5% namhlanje kwi-357p.
Ukupapashwa kweBloomsbury kukuthenga ixesha elide.
tags Publishing Bloomsbury, Umshicileli kaHarry Potter iBloomsbury, amajelo eendaba kunye nokupapasha impahla